सम्झनामा आमा- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — “कपडाहरूसँगको माया”मेरो किशोर अवस्थाको धेरैजसो समय होस्टलमै बित्यो । जब म बिदामा घर आउँथें, आमालाई अनौठो रूप र भंगिमामा देख्दा म तीनछक पर्थें । आमाले त मेरो न्यास्रो मेटाउन कहिले मेरो स्वीटर त कहिले सल ओढेर बस्ने गर्नुहुँदो रहेछ । सन्तानप्रतिको माया र मोहको सायद त्यो निकै अब्बल उदाहरण थियो । एक दिन मैले सोधें, ‘हजुरको लुगा छैन र ?’
मेरो किशोर अवस्थाको धेरैजसो समय होस्टलमै बित्यो । जब म बिदामा घर आउँथें, आमालाई अनौठो रूप र भंगिमामा देख्दा म तीनछक पर्थें । आमाले त मेरो न्यास्रो मेटाउन कहिले मेरो स्वीटर त कहिले सल ओढेर बस्ने गर्नुहुँदो रहेछ । सन्तानप्रतिको माया र मोहको सायद त्यो निकै अब्बल उदाहरण थियो । एक दिन मैले सोधें, ‘हजुरको लुगा छैन र ?’
उहाँले पुलुक्क मतिर स्नेही नजर फ्याँक्दै भन्नुभयो, ‘तिम्रा लुगा लगाउँदा तिमी सधैं मेरो काखैमा भएको महसुस हुन्छ ।’
त्यति बेला आमाको त्यो जवाफलाई मैले हावामा उडाइदिएकी थिएँ । जब म स्वयं आमा भएँ, त्यसपछि मात्रै मैले उहाँले दिनुभएको जवाफभित्रको मर्म बुझ्न थालें । वर्षदिनअघि उहाँको स्वर्गवास भयो । अहिले पनि मलाई त्यो मर्मस्पर्शी जवाफ र मेरै स्वीटर लाउँदै मलाई पर्खिबस्ने आमाको अनुहारको सम्झना आउँछ । अझ अल्पायुमै संसार छाडेकी आफ्नी छोरीलाई सम्झिँदा म भावशून्य हुन्छु ।
मेरो लागि सर्जक र गुरु दुवै हुनुहुन्थ्यो आमा । ‘छोराछोरीलाई दु:ख दिनु हुँदैन, माग्नु पनि हुँदैन, बरु उल्टै सहयोग गर्नुपर्छ’ भन्ने धारणा राख्ने हुनाले आमाले मसँग कहिल्यै केही माग्नुभएन । तर, आमाको मुख हेर्ने दिन म प्राय: उहाँकै इच्छा बुझेर उपहार दिने गर्थें । पाँच कक्षासम्मको औपचारिक शिक्षा लिनुभएकी उहाँको जीवनशैली स्वावलम्बी प्रकृतिको थियो । घरको कामकाज गरेरै पनि सम्पत्ति जोड्न सक्ने क्षमता उहाँमा थियो । कहिल्यै अरूका अघिल्तिर सहयोगको हात फैलाउनुभएको मैले देखिनँ । यहाँसम्म कि, उहाँले आफ्नो काजकिरिया गर्न भनेर बैंकमा केही रकम जम्मा पार्नुभएको थियो ।
छोरी गुमाएको पीडामा मैले आँसु झार्दै गर्दा आमाले मलाई सान्त्वना दिँदै भन्नुभएको थियो, ‘पृथ्वी भनेको मृत्युलोक हो । सबैले एक दिन जानैपर्छ । सम्झनामै खुसी हुन जान्नुपर्छ । दु:खी कहिल्यै हुनु हुन्न ।’ आज जब छोरीको सम्झना आउँछ, म आमाको यही वचन सम्झन्छु र मनलाई बलियो बनाउने गर्छु । दिवंगत छोरी र आमाका कपडाहरू सम्हालेरै राखेकी छु मैले । कहिलेकाहीँ अत्यास लागेका बेला ती कपडाहरू लाएर सुत्ने गर्छु ।
“चित्रकार भएपछि आमा दंग”
ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ निमा ग्याम्जो बल लामा र उनकी आमा साम्देन डोल्मा।
स्कुल जाँदै गर्दाका दिनहरू सम्झिन्छु । म प्राय: कापीमा चित्र कोरिरहन्थें । कहिले भगवान् त कहिले रुख र पातपतिंगरका चित्र पानाका छेउछाउ हमेसा हुन्थे । यतिसम्म कि, स्कुल जान हतार–हतार भात खाइरहेका बेला पनि बायाँ हातले भने म भुइँमा कोरिरहेको हुन्थें । यी सब देखेपछि आमाले गाली गर्नुहुन्थ्यो, ‘यसरी चित्र कोर्नु हुन्न । रिन लाग्छ ।’
तर, आज म जहाँ छु, चित्रकै कारणले छु । यसमा आमाको घुमाउरो उत्प्रेरणा छ । थाङका चित्रमा हासिल गरेको ज्ञानकै कारण प्राज्ञ म भएँ । सहरमा घर ठड्याएँ । आमालाई बुढेसकालसम्म सुखले पाल्न सकें । पहाड घर सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुमा हो, तर आमा धेरैजसो मसँग (स्वयम्भू) बस्नुभयो । बेला–बेला म आमालाई थाङकाको विषयलाई लिएर जिस्क्याउँथे । आमा बाल्यकाल सम्झेर हाँस्नुहुन्थ्यो । खुसीले रमाउनुहुन्थ्यो ।
उहाँ आँपको खुब सौखिन हुनुहुन्थ्यो । म जहाँ पुग्दा पनि उहाँलाई ताजा आँप ल्याइदिन्थें । हरेक आमा खुवाउने औंसीको दिन म उहाँको यही इच्छा पूरा गर्ने प्रयत्न गर्थें । आँपबाहेक उहाँलाई ब्रोइलर कुखुराको मासु पनि असाध्यै मन पथ्र्यो । लुगाफाटामा उहाँ खासै सोखिन हुनुहुन्नथ्यो । औंसीको दिन अरू पाहुनाहरूले लुगाफाटा ल्याउँदा पनि उहाँले सधैं ‘पर्दैन’ भन्नुहुन्थ्यो ।
आज (आइतबार) आमा बित्नुभएको ३५ औं दिन । डुक्पा रिन्पोछेको गुम्बाका आनीहरूलाई बोलाएर पूजा गरें, आमालाई सम्झें । यस पटकको औंसी आमाविहीन हुनुपर्‍यो ।
“आमाकै कारण कुलपति भएँ”
साहित्यकार एवं संगीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सरुभक्त आमा लक्ष्मी श्रेष्ठसँग गत वर्ष मातातीर्थ औंसीमा।
सबैभन्दा मन पर्ने चाडपर्वको नाम लिनुपर्‍यो भने म सधैं आमाको मुख हेर्ने औंसी सम्झिने गर्छु । यो चाड मलाई विशिष्ट र मौलिक लाग्छ । जन्मदिने व्यक्तिको पूजन गर्ने दिनको महत्त्व अरूभन्दा भिन्न हुन्छ । यो आत्मीयता र प्रेम जोडिएको चाड हो । तर, यस पालि पहिलो चोटि शून्य–शून्य महसुस हुँदै छ । गएको मंसिर पहिलो साता आमाले हाम्रो साथ छोड्नुभयो । साढे तीन वर्षअघि बुवा बित्नुुहुँदा आमा हुनुहुन्छ भनेर मन अडिएको थियो । तर आमाले पनि छोडेर जानुभएपछि घरमा एक किसिमको सन्नाटा छाएको छ । मैले ६२ वर्षसम्म आमाको माया र आशीर्वाद पाइरहेँ, यो नै ठूलो कुरा हो । तर, आमाको माया जति भए पनि नपुग्ने रहेछ ।
आमा एकदमै विचारशील स्वभावकी हुनुहुन्थ्यो । पढाइलेखाइबाट वञ्चित तर व्यावहारिक रूपमा भने एकदमै चुस्त । आमाले बोल्दा प्रयोग गर्ने उखानटुक्का पढेलेखेकाले पनि बुझ्दैनथे । एकदम चिन्तनशील र वैचारिक हुन्थे उहाँका उखानटुक्का । आमाको त्यही स्वभाव ममा सरेको हुनुपर्छ । त्यही भएर म जे छु, आमाकै प्रेरणा ठान्छु ।
संगीत–नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति आमाकै कारण हुन पुगेँ । साढे तीन वर्षअघि बुवा बित्नुभएको थियो । म कोरामा थिएँ । सातौं दिन मन्त्रालयबाट ‘कुलपति बनिदिनुपर्‍यो’ भनेर फोन आयो । पितृशोकमा डुबिरहेको बेला मैले ‘सक्दिनँ होला’ भनेछु । आमाले सुनिरहनुभएको रहेछ, नजिकै आएर हौसला दिनुभयो, ‘राज्यले सुुम्पिन खोजेको यो जिम्मेवारी तिम्रा बुवाको आशीर्वाद पनि हो । अघि बढ ।’ यसपछि म तेह्रौं दिनको काम सकेर चौधौं दिन काठमाडौं आएँ र पन्ध्रौं दिन प्रधानमन्त्री निवासमा शपथ लिन पुगेँ । आमासँगको अन्तिम समय अहिले पनि सम्झन्छु । म पोखरामै थिएँ । निमोनियाँका कारण आमालाई अस्पताल लगिएको थियो । मंसिर ५ गते बिहानको तीन बजे उहाँको मुटुको धडकन अचानक बन्द भयो । उहाँको एउटा इच्छा सदाका लागि अधुरै रह्यो । आमा र बुवाको ८४ वर्षमा जङकु गर्ने सपना थियो । बुवा बित्नुभएपछि आमाको भए पनि गर्ने सपना पूरा गर्ने सोचेका थियौं । त्यो पूरा हुन सकेन । आमाबुवा दुवै जना ८२ वर्षकै उमेरमा बित्नुभयो ।
काठमाडौँ — युट्युब ट्रेन्डमा आइतबार गज्जबै भयो । टप फाइभमध्ये चार नेपाली फिल्म परे । पाँचौं स्थानमा पनि फिल्म नै थियो तर हिन्दी भाषामा अनुवाद गरिएको तेलुगु फिल्म ‘हार्ट अट्याक टु’ ।
चारमध्ये ‘कारखाना,’ ‘पुरानो डुंगा,’ ‘पर्व’ र ‘रानी’ क्रमश: पहिलोदेखि चौथो नम्बरमा रहे । यिनमा पनि अघिल्ला तीन फिल्म शुक्रबार र शनिबार मात्रै युट्युबमा अपलोड गरिएका थिए ।
बुुढासुब्बा डिजिटल, हाइलाइट्स नेपाल र सुवास इन्टरटेन्मेन्टले नयाँ वर्षको अवसरमा फिल्म युट्युबमा राखेका थिए । पहिलो नम्बरमा रहेको ‘कारखाना’ मा आइतबार दिउँसोसम्म ७ लाख ४८ हजारभन्दा बढी भ्युज थियो । २ हजार प्रतिक्रियामध्ये आधाउधीमा ‘नयाँ वर्षको शुभकामना’ लेखिएका छन् ।
‘म त भर्खरै पुरानो डुंगा हेरेर आएको,’ केशव केसी लेख्छन्, ‘अब कारखाना हेर्न लागियो, सबैलाई २०७५ को शुभकामना छ है ।’
महिलाहरू सन्तान उत्पादन गर्ने कारखाना होइनन् भन्ने सन्देश दिइएको उक्त फिल्मलाई कतिले राम्रो भनेका छन् भने केहीलाई झुर लागेछ । गम्भीर विषयको फितलो प्रस्तुति भन्दै कतिपय युट्युब दर्शक निराश बनेका छन् । ‘फिल्म बनाउन नि कति अल्छी गरेका हौ ?’ रविन श्रेष्ठको प्रतिक्रिया, ‘न साउन्ड राम्ररी सम्पादन गरिएको छ, न सिन राम्ररी खिचिएको छ । दिउँसोलाई राति भनेर देखाइएको छ, बसपार्क के हो त्यस्तो ? मेहनत गर्नुपर्‍यो ।’ फिल्ममा वर्षा सिवाकोटी, सुशील पौडेल, नवीन लम्साल लगायतको अभिनय छ ।
ट्रेन्डिङको दोस्रो नम्बरमा परेको ‘पुरानो डुंगा’ मा १० लाख २६ हजार भ्युज रहँदा २५ सयभन्दा बढी फिडब्याक आएका थिए । अधिकांशले फिल्मको प्रशंसा गरेका छन् । मेनुका प्रधान, दयाहाङ राई र माओत्से गुरुङको काम मन परेको भन्दै तिनलाई बधाई र धन्यवाद दिनेहरू कमेन्ट खण्डमा प्रशस्त भेटिए । ‘नेचुरल मुभी विद नेचुरल क्यारेक्टर’ (स्वाभाविक अभिनयसहितको राम्रो फिल्म) भन्दै हिरो कुमार नामक युट्युब युजरले सामाजिक कथामा बनेको फिल्म मन परेको आशयमा कमेन्ट लेखेका छन् ।
‘म मेनुको ठूलो फ्यान भएँ’, राज राना लेख्छन्, ‘नाइस वर्क मनु ।’ विकास आचार्यले साधारण विषयमा वास्तविक कथा देखाइएको बताएका छन् । ‘पुरानो डुंगा टिमलाई धन्यवाद र नयाँ डुंगाको सुटिङ सुरु गर्नुस् भन्न चाहन्छु,’ उनको आग्रह । लाक्पा डिकी, ओम घर्ती मगर लगायतले फिल्मको अन्त्यमा चित्त बुझाएका छैनन् । अस्वाभाविक ढंगले सकिएको पो हो कि भन्ने जिज्ञासा राखेका छन् ।
तेस्रो स्थानमा रहेको ‘पर्व’ फिल्ममा पनि नव वर्षको शुभकामना दिनेहरूले कमेन्ट सेक्सन भरेका छन् । यसमा ३ लाख भ्युज र ६ सय प्लस प्रतिक्रिया आएका थिए । ‘नयाँ वर्ष सुरु गर्ने गतिलो तरिका,’ विशाल मगरले लेखेका छन्, ‘वन्डरफुल मुभी । थ्यांक्यु सो मच ।’ सुमन परियारले चाहिँ थ्रिलर जानराको फिल्म बनाएकोमा बधाई दिएका छन् भने कविता लामाले फिल्म हेरेर केही नयाँ कुरा जान्न पाएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । पुकार अधिकारी लेख्छन्, ‘सबले नयाँ वर्षको अवसरमा मुभी अपलोड गरेर तनाव दिए, यहाँ हामीलाई पढ्ने वातावरण नै छैन ।’
‘पर्व’ मा नम्रता श्रेष्ठ, कोसिस क्षत्री, माला लिम्बू लगायतको अभिनय देख्न सकिन्छ ।
ट्ेरन्डिङको चौथो नम्बरमा रहेको ‘रानी’ फिल्म सातादिनअघि नै अपलोड गरिएको थियो । पछिल्ला केही दिनदेखि यो लगातार ट्ेरन्डिङको टप फाइभभित्र छ । यसमा झन्डै १४ लाख भ्युज देखिन्छ भने १८ सय प्रतिक्रिया जम्मा भएका छन् । मलिना जोशी, अनुपविक्रम शाही, मनीषसुन्दर श्रेष्ठ, सरुक ताम्राकार लगायतले अभिनय गरेका छन् ।
त्रिकोणात्मक प्रेम कहानीमा आधारित फिल्मका हिरो र भिलेन ह्यान्डसम भए पनि हिरोइन चित्तबुझ्दो नभएको सुमन मगरको गुनासो छ । ‘साह्रै तोर्पे हिरोइन,’ उनी लेख्छन्, ‘लास्टै झुर एक्टिङ ।’ स्याडोज नामक युट्युब युजरलाई भने यो बेस्ट फिल्म लागेछ । हेरेर मजा आएको उल्लेख गरेका छन् । विश्व पाण्डेले फिल्म हेर्नुभन्दा अगाडि नै कमेन्ट गर्नेलाई आफूतिर हाजिर हुन अनुरोध गरेका छन् । सुदीप पौडेले जिन्दगीमा यतिसम्मको नराम्रो फिल्म नहरेको बताएका छन् । उनी लेख्छन्, ‘बकवास ।’
आइतबार दिउँसोसम्मका पाँच
२. पुरानो डुंगा
५. हार्ट अट्याक